Android na-ekwu aha ọma nke desserts maka nsụgharị ya | Gam akporosis
Agaghị akpọ aha gam akporo gam akporo mgbe desserts bidoro na Android 10
All gam akporo nsụgharị aha mgbe eji megharịa ọnụ aha ruo mgbe a kacha ọhụrụ version nke gam akporo 9 achịcha. Mana ọ gaghị adị ka nke ahụ site na gam akporo 10. Ya mere, anyị nwere ike ichefu ịchọ maka ihe swiiti aha ya malitere na R.
Anyị nwere a dum iche iche nke ụtọ aha dị ka Kit Kat, Lollipop, Froyo na ọtụtụ ndị ọzọ nọ na-egosi mgbanwe nke sistemụ arụmọrụ nke kachasị arụnyere n'ụwa niile taa.
Aha eji megharịa ọnụ kachasị mma maka gam akporo bụ achịcha. Dị ka anyị maara taa, Guysmụ okorobịa Google emeela mkpebi na gam akporo 10 ga-akpọ dị ka bụ na-enweghị ihe ọ bụla eji megharịa ọnụ na-akpakọrịta ya na ihe ụtọ.
Na ngụkọta anyị nwere: cupcake 1.5, Inye onyinye 1.6, Àmụmà 2.0-1, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Mmanụ aṅụ 3.02, Sanwichi Sanwichi 4.0, Jelly bean 4.1-3, KitKat 4.4, Lollipop, 5.0-1, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0-1, Oreo 8.0-1, na Achịcha 9.0. A ụzọ dị ụtọ nke ukwuu na anyị nwere ike ibi na Androidsis na-ekwu maka ọdịnihu nke sistemu arụmọrụ a.
Yabụ anyị enweela aha gọọmentị maka ụdị ọhụrụ ahụ: A gam akporo 10. Ugbu a Anyị nwere ike ichefu ihe oyiyi ndị ahụ Google nwere na Mountain View nakwa na ha meghere nsụgharị ọhụrụ iji hapụ anyị niile nwere obi abụọ banyere ihe eji megharịa ọnụ ha ga-eji na-esote mbipute. Ọ dịla otu akwụkwọ ozi na mkpụrụedemede, yabụ enwere ọtụtụ ozi metụtara aha dị omimi nke ụdị gam akporo ọhụrụ; ọbụna ha rịọrọ anyị maka enyemaka na-akpọ Android N ka Nougat.
Ugbu a, anyị ga-aga gam akporo 10, gaa na gam akporo 11 wee gaa n'ihu ruo mgbe anyị ga-aga sistemụ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ bụ ya. Ihe kpatara mgbanwe a enwere ọtụtụ. Otu bụ isi ike nke ịchọta ihe eji megharịa ọnụ na mkpụrụedemede "Q". Ihe ọzọ bụ na ọnụọgụ nke iri bụ isi zuru oke maka mgbanwe ndị ọzọ wee gụọ ha, na nke atọ, mgbe Z gasịrị, gịnị ga-eme?
Thatbụ na dị ka ọ nwere ike, ugbu a anyị na-asị goodbye niile aha ndị nwere "sugary" niile nsụgharị nke gam akporo na njem a nke na-aga n'ihu kemgbe afọ kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Agaghị akpọ aha gam akporo gam akporo mgbe desserts bidoro na Android 10
Etu ị ga - esi amata ngwà ị na - ejighi wee hichapụ ha